Stallman na-adị ndụ, na-ebi ndụ na na agba | Site na Linux
Stallman na-adị ndụ, na-ebi ndụ na ụcha zuru oke
Ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na ọrụ Richard Stallman bụ echiche kpamkpam ugbu a. Onyinye ya na ngwanrọ n'efu abụrụla nkwalite nke free software. Agara m otu nkuzi gị, m ga-ekwukwa na ọ bụ ihe ọ bụla mana ihe m tụrụ anya ya. Maka ma ihe ọma ma ihe ọjọọ. Kwado ụdị ahụmịhe siri ike na m ga-edo anya na ndị a bụ echiche nke aka m ma na-anọchite anya naanị echiche m banyere okwu a.
2 Nwepu vs. Obodo
3 Ọgba aghara ahụ
M bi na obodo bụ ebe ikpeazụ Stallman kwụsịrị na Mexico. Isi ọnụnọ ya bụ n'isi obodo ahụ, mana na Tijuana na Puebla, anyị nwere isi ọma ịnata otu. N'okwu m, e nyere ogbako a na gburugburu nke Nzukọ Mba nke Ngwanrọ Na-adịghị, nzuko omeiwu nke gunyere isi okwu, ulo akwukwo na ihe ndi ozo. Emere ihe omume a niile na akụrụngwa nke Mahadum mara mma nke steeti Puebla, ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ka elu.
Ọ bụ ụtụtụ Wenezde. Stallman ga-ahụ maka imeghe ihe omume ahụ, ihe ngosi ya bụ nke mbụ. N'ebe ahụ ka m weere ihe ịtụnanya mbụ nke ọtụtụ na ihe omume ahụ maka m: naanị ndị nhazi jiri sọftụwia n'efu. Ala azụ m ịnakwere eziokwu ahụ bụ na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-aga ogbako nke nna nke free software na igwe na-ebu Windows na iPads ebe niile. Na ogbako ahụ enwere m ike ịhụ naanị igwe na-agba Lubuntu.
Anọ m ọdụ n'ahịrị nke abụọ. Enwetụbeghị m mmasị ịga n'ihu n'ụdị ebe ndị a, mana echere m na ọ bụ oge dị mma iji wepu onwe. N’agbanyeghi nke a, n’ọnọdụ m ọ siri ike nnweta foto bara uru, n’agbanyeghi na nke a bụ nke kachasị n’ihi enyoghi anya nke igwe foto dijitalụ m na-ata ahụhụ. Kedu ụzọ ọ bụla, anọ m ebe ahụ ma achọrọ m ịnụ ihe Richard Stallman nwere ikwu.
Na mberede pụtara. Ọ dị ka mmadụ na-eche ya mgbe niile. Uwe uhie na uwe ogologo ọkpa nke agba aja aja maka m. Nye anyị akwụkwọ mmado, nke anyị na-akpọ ebe a akwụkwọ mmado, na motifs si GNU, na FSF na mkpọsa megide DRM. O resịrị anyị isiokwu maka abamuru nke nzukọ ọ na-elekọta. Azụrụ m obere baajị, maka na achọghị m nnukwu, ikwu eziokwu.
N'oge a Enwetara m ihe ijuanya nke abụọ nke ụtụtụ. Echere m mgbe niile ka Stallman nwere agwa na-eme ihe ike iwe, mana ọ bụ ezigbo mmadụ na mgbe ụfọdụ enweghị nkwanye ugwu. Karịsịa na mgbazi e nyere onye nhazi mgbe ọ hiere ụzọ nke ịkpọ oku nwe ya ka gịnị nkeonwe. Nzukọ ahụ malitere.
Nwepu vs. Obodo
N'ikwu okwu n'ezoghị ọnụ m, okwu ahụ adabaghị isi okwu ebe amaghị ama echiche Stallman, n'agbanyeghị na o gosipụtara isiokwu ndị na-atọ ụtọ dị ka boycott Harry Potter ma ọ bụ echiche ya banyere nkesa ọdịnaya. Aghọtara m ọhụụ gị banyere nkewa ọrụ na ikikere ga-eso, mana ekwetaghị m. Mana ka anyị ghara ibute onwe anyị ụzọ.
Ajuju ndi a bu ajuju ndi ichoro na ihe dika nke a. Azịza ya dịkwa. Ya mere, ọ bụ ihe na-eme, nke m nwere ike ịzọpụta ajụjụ anọ ndị ọha na eze jụrụ, nke m masịrị m; na-enweghị ịkụ ihe mgbaru ọsọ n'ezie: 1
Enwere ihe ndị anyị na - enweghị ike iji sọftụwia na - akwụghị ụgwọ mee. Kedụ ihe anyị ga - eme iji meziwanye ya?
Nnwere onwe chọrọ ịchụ àjà.
Na Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha na-amanye anyị ka anyị jiri sọftụwia nwegasịrị ihe.
Have ga-ahazi ngagharị iwe. (Lee obere arụmụka na kedu manyere ha ka ha jiri, echiche nke igwe na ihe ndị ahụ)
Ọ na-ekwu maka ọrụ, mana ọ kpọghị aha ọgwụ ...
Kedu ihe kpatara ọgwụ ọjọọ ji dịtụ iche, nke patenti na-echebe. Enweghi ike ichebe nke a, n'ihi na ọ bụ ngosipụta nke echiche nwere ike ichebe.
Kedu usoro ị chere na microtransactions ị na-ekwu maka ya site na onyinye afọ ofufo nye ndị na-ese ihe kwesịrị ịme?
Ha abụghị microtransactions, ibu2 ya a otutu ego. (Onye ajuju kwuru banyere bitcoin ma kwuo na ha amaghị otú o si arụ ọrụ)
Agaghị m enwe ike ịchọ ịjụ ya ihe. N’ihi ya, ajụrụ m ya banyere egwuregwu vidio dị ka ọrụ na-abaghị uru na ihe kpatara nka a ga-eji hapụ ha, wepụta ebe ọ si. Ọ na-ekwu na ọ dịghị mkpa, mana ọ ga-adị mma. Ajukwara m ya maka otu esi eji Creative Commons No Derivatives ikike maka uche ya. Ọ na-ekwu na ịkekọrịta ọrụ dị mma, mana ịgbanwe ihe bụ ụgha. Enweghị m ike ikwenye karịa.
Nke a bụ obere nsogbu. Stallman nwere nsogbu ntị, nke ọ dọrọ anyị aka na ntị gbasara onwe ya. Ọ gwara anyị mgbe niile ka anyị kaa akara ụda olu anyị, jiri nwayọ na-ekwu okwu. Iji malite, ọkwa Spanish o ruru bụ nke a na-akwanyere ùgwù, na-achịkwa ime nzukọ na-eji naanị oge ole na ole enyemaka nke mmadụ ịsụgharị okwu na-agụghị ya n'asụsụ anyị. Enwere m obi ụtọ na nke a ma na-ekele gị maka iwepụta oge iji mụta ezigbo Spanish.
Otú ọ dị, nke a mere ka nkwurịta okwu sie ike. Rụ ụka dị ka nke a abụghị ezigbo echiche, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ gbatara anyị ọsọ. Nke ọ bụla ọ bụ, ajụjụ ndị ahụ na-eme ka anyị nwee mmetụta na-enweghị isi. Iji maa atụ: Stallman chefuru na ọ bụrụ na ndị ogbenye enweghị ike ịkwụ ụgwọ afọ ofufo maka ọdịnaya, ha enweghị ike ị nweta ego maka ya. Ihe m na-ekwu bụ na anyị na-ekwu maka ịda ogbenye. A ka nwere ndị bi ebe a agụụ na-enweghị ike iche maka ịzụrụ ihe dị ka. O yiri m na nke a bụ ntụpọ dị mkpa na arụmụka gị, agbanyeghị na edebere m na ọ bụ nchịkọta nke echiche ka ukwuu. Bọtịnụ ndenye ọpụpụ ị kpọtụrụ aha dị n'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụghị na ọ gafere nke ọma ikwu.
Ọgba aghara ahụ
Nkewa nke ọrụ a dị m ka ihe nzuzu. M na-akọwa. Stallman na-ekwu maka nkewa n'etiti na-arụ ọrụ bara uru, art y echiche. Anyị nwere ike itinye ihe atụ atọ, ịbụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, eserese na mpempe echiche; karị. Ihe atọ a bụ ngosipụta nke ọdịbendị na m atọ atọ ga-atọhapụ.
Ikike CC-ND abụghị n'efu. Ikpuchido echiche ya abụghị omenaala n'efu. Kekọrịta anaghị edozi ihe, ebe ọ na-egbochi ọtụtụ ojiji ndị ọzọ maka ya. Emechara m were okwu mmụta ikpeazụ nke mmemme ahụ, enyere site na Gunnar nkịta; site na nke m nwere ike weputa echiche di nkpa: Koodu bu udiri okike. Ọ na-ekwu maka sọftụwia n'efu dị ka ngosipụta ọdịbendị ma na-ahụ onye nwe ya dị ka mmebi akụkọ ihe mere mere o ji mechie echiche ndị ahụ. Mkparịta ụka mbụ na-agbawa obi na-akwado sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, agbanyeghị na Wolf gosipụtara ya nke ọma karịa onwe m, karịa m, onye na - agbaghapụta ihe ọ pụtara.
Ugbu a, iji esemokwu a (ma ọ bụ dịka m ghọtara ya) sọftụwia abụghị ihe karịrị otu ngosipụta nke ọdịbendị, ọdịbendị n'efu kpọmkwem. Akwụkwọ ikike CC-BY ugbua na-echebe ikike omume nke onye edemede na ọrụ ahụ, yabụ ọ bụrụ na mmadụ ewere ederede m ebe m na-ekwu na ụbọchị anwụ na-acha na pops na-amasị m; wepụtara n'okpuru akwụkwọ ikike efu dịka CC-BY (ma ọ bụ jiri CC-BY-SA; copyleft; dị ka echiche Richard Stallman bụ nke a na-akọwaghị akọwapụta ya) Enwere m ike ikwupụta nkwutọ ma ọ bụrụ na mmadụ gbanwee ya iji mee ka ọ dị m ka ụbọchị mmiri ozuzo na lollipops.
Site na esemokwu na nso nso a na mbipute 4.0 nke Creative Commons, enwere esemokwu banyere mgbapụ nke ngalaba NC na ND, naanị n'ihi na ọrụ ndị ha na-echebe enweghị ike ịbụ n'efu. (Etu ị ga - esi nyefee blọọgụ a ikike, azụmahịa na - abụghị nke azụmahịa; nke a nwere ike ịbụ ọdịnala ọdịnala na aka ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ). Ọ bụ mmejọ m ka m ghara ịjụ ọnọdụ ya na nke a, mana echere m na ọ bụ amụma ya. Ọ na-aga nkesa Gwa dị ka o mere na mbụ. N'ezie, m na-ebu ụzọ azịza nke nwere ike ịdị iche na n'ọnọdụ kachasị mma, bụrụ ihe na-agbanwe agbanwe. Site ebe a mgbaghara m maka nke a, ọ bụrụ na ọ bụ ya.
Ọ bụ ihe omume na-atọ ụtọ. Met Perseus dị ndụ, soro ya ụlọ ọrụ Ruby, mụta ụfọdụ Blender, nwee akwụkwọ mmado, na ndị ọzọ. Ejiri m ego pesos 300 maka ụbọchị atọ na agbanyeghị na anaghị m ewere ebe ọ bụla m chọrọ3 Ọ dị m ka ọ bara uru ọ bụla. Enweghị m ike ịsị na ịhụ Richard Stallman ndụ gbanwere ndụ m, mana ọ bụ nkuzi na-atọ ọchị: Kedu onye zutara m nke a ezigbo mma wildebeest? Kedu ndị na-azụ ya iji nọgide na-agbachitere nnwere onwe ha?
Ndị bịara emume a jụrụ ndị mbido a. Ọ bụ Richard Stallman zara ha. Maka ebumnuche nke usoro na enweghị ike inwe ndekọ a pụrụ ịdabere na ha, ana m arapara na nsụgharị nke edere na ncheta m na ederede m. Maazị Stallman, anaghị m agha ụgha ma ọ bụ na-agbagọ echiche gị. Nke a nwere ike mfe corroborated gị onye saịtị.
Pesos Mexico (MXN). N'ezie, anyị anaghị ewere ya dị ka nnukwu ebe a; mana o yikarịrị ka ọ na-ezo aka n'ike nke ego eletrọniki. O doro anya na Bitcoin na-akwado ihe ruru 8 efu mgbe oge ahụ gasịrị. Biko mezie m ma ọ bụrụ na mehie.
M pụtara, M nwekwara ihe m ga-eme. Gagharị na obodo a gbagwojuru anya site na ọtụtụ ndozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Stallman na-adị ndụ, na-ebi ndụ na ụcha zuru oke
Obere ihe abuo n’enweghi ihe. Ihe mgbakwasị ụkwụ yiri ka ọ naghị arụ ọrụ. Ma ha ka dị mma. Na njikọ nke foto apụtaghị, nke dị ebe a
Ma nke ahụ arụghịkwa ọrụ. Nke ahụ bụ ka m si ahapụ ya, ezuru ọgụ maka taa 😛
Ihe ndeputa ihe yiri ka obu nsogbu na isiokwu, iji hụ ma ọ bụ elav ma ọ bụ Gaara ga-enweta ya. Banyere njikọ ahụ, enyochare m ụdị akụkọ ihe mere eme na ọ dị ka ị gaferela ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpinye ya na nkwupụta ma tinye onwe m ma ọ bụ ndị isi nchịkwa iji hụ ya. 😛
Ọ dị mma, ee, anyị ga-etinye onwe anyị maka ya, enwere ọtụtụ ihe pụtala na anyị amataghị mgbe anyị bidoro ndị otu ọhụụ. 🙁
Ọ bụ obere ihe, agbanyeghị. Enwere m mmasị n'isiokwu a 😀
Foto ndị ahụ adịghị ahụ.
Ekwenyere m na Stallman. Ọ bụrụ na ị hapụ ọrụ edemede gị, ha nwere ike gbanwee ha nke ga-emebi ozi gị. E mepụtaghị okwu ugha ka ụnyaahụ.
Zọ kachasị mma iji kwupụta ahịrịokwu mmadụ bụ ịtụgharị okwu dabara adaba.
Anyị enweghị ike ịkọwa ederede na ngwanrọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịrụ ọrụ yiri nke Stallman, ị nwere ikike ime ya. Edebeghị ederede ederede, a na-agụ ya ma bụrụ isi iyi nke mmụọ maka ndị ọzọ. E nwere ọtụtụ nde akwụkwọ ọgụgụ ndị na-echegharị echiche ndị akachaghị agwụ, ọ nweghịkwa onye nwere mkpịsị aka ya abụọ ga-ebo ndị dere akwụkwọ ohi ahụ ohi ma ọ bụ mebie ikike. Stallman na-agba mbọ izere ịbụ onye a na-ekwu na okwu ọ na-edeghị. Karịa ịgbachitere ederede ahụ, ọ chọrọ iji chebe mbinye aka gị.
Nghahie gha aghaghi ibu nsogbu; Mana ikikere efu na-edozi nsogbu nke ikike ikike. Ekwenyeghi m, mana ND anaghị ekwe ka ntụgharị asụsụ nke edemede na-enweghị nkwenye doro anya nke onye edemede yana enyere m mmachi kwesịrị ekwesị. Ntuziaka bụ akụkụ dị mkpa nke ọdịbendị.
Uche mmadu banyere ihe "X" adighi mkpa. Stallman gbalịrị ịsụgharị ihe odide ya dị mkpa gaa n'asụsụ ndị ọzọ. You nwere ike ide ederede n'asụsụ gị nke metụtara ihe Stallman dere na-atụghị ụjọ imebi ikike. Ihe ị ga-eme ka ọ pụta ìhè bụ na ọ bụ nkọwa gị maka ihe Stallman dere, ọ bụghị ihe o dere n'ezie. Nweghị ike ịtụgharị ederede ma jiri aha onye ọzọ banye ya na-enweghị nkwenye ha. Ka o sina dị, enweghị m ike iche n’echiche Stallman na-akatọ ekwensu dara ogbenye nke chọrọ ịgbasa ozi ya n’asụsụ ọzọ.
"Cannot nweghị ike ịtụgharị ederede ma jiri aha onye ọzọ banye ya na-enweghị nkwenye ha"
BY Creative Commons na-elekọta nke ahụ ma nke ahụ ezuola.
Echeghị m na ị ghọtara ihe okwu ya pụtara. Cannot nweghị ike ịtụgharị ederede Doe wee banye aha Doe na-enweghị nkwenye ya. Ọ gaghị atọ m ọchị ma ọ bụrụ na mmadụ atụgharịa ederede m n'ụzọ ọjọọ site n'itinye aha m na njedebe. Ọ ga-enye m echiche na m dere ntụgharị asụsụ ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu "ntụgharị asụsụ nke Doe nke Mengano", opekata mpe o doro anya na ọ bụghị nke m mana ederede ederede ka agbagọ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ị na-akpọtụrụ onye edemede mbụ mgbe niile.
Mana nke ahụ bụ kpomkwem ihe BY achọrọ na-elekọta, nke dị na ikikere CC niile.
Onyinye - Ikwesiri ikweta otuto nke ọrụ ahụ n'ụzọ onye edemede ma ọ bụ onye nyere ikike nyere iwu (mana ọ bụghị n'ụzọ na-egosi na ị kwadoro ma ọ bụ na ha na-akwado iji ọrụ gị).
Iwu nke BY na-amanye gi ikwuputa onye edemede mbu. Enwere m ike ịsụgharị ederede kpamkpam ma zoo onye edemede mbụ (anaghị m emerụ BY) n’ajụghị maka ikike. Ọ bụ ya mere DN ji dị mkpa, ọ bụ ahịrịokwu chọrọ nkesa ederede na-enweghị mgbanwe. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịtụgharị ma ọ bụ megharia ederede na DN, ha ga-ajụrịrị onye mbụ dere akwụkwọ ikike.
@diazepan, njiri mara ya na-egosi itinye aha onye edemede mbụ. Nweghị ike iji ọrụ ha iji nye onwe gị otuto, ma ọ bụ ị nwere ike ịpụta na ị nwere nkwado ha… Mana ọ bụrụ na ịsụgharị ọrụ "n'ụzọ nkịtị", na-agbakwunye aha onye edemede na akwụkwọ ikike CC-BY mbụ, ị naghị emebi ihe ọ bụla (nke m maara nke). Dabere na paragraf nke 3b nke ikikere ị kwesịrị igosi naanị na ọ bụ ntụgharị. Ọ bụrụ na atụgharịrị ya n'ebumnuche, imerụ onye edemede ahụ, ị ​​na-emerụ paragraf 4c mana ekwula ihe ọ bụla gbasara njehie "fortuitous". Amaghị m ma ọ bụrụ na ị na-ejikwa ozi ndị ọzọ nke m na-amaghị.
E nwere ibe weebụ nwere ederede CC-BY nke a sụgharịrị (nke ọma ekwu) na nkọwa sitere n'aka ndị na-agụ akwụkwọ na-emegharị onye edemede mbụ na onye ntụgharị. Akwụkwọ ikike CC-BY zuru oke maka wikis na ederede ndị ọzọ na-enweghị isi (n'uche m).
Ugbu a, iwu nke ND na-egbochi nke a. Ọ na-abụkarị ndị mmadụ ịrịọ ikikere iji gbanwee ọrụ na CC-BY ma ọ bụ SA, mana a na-eme nke a dịka nkwanye ùgwù ọ bụla. Ime ya site na oke oru na eme ka ihe sie ike, ebe o siri ike ịkpọtụrụ; kwuo maka ọnwụ nke onye edemede.
Wolf kwuru ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụ na ND na NC nwere oge ngwụcha, ma mgbe ha nwụrụ, ha ghọrọ ọdịbendị n'efu.
N'okwu ahụ, ọ bụrụ na onye edemede nke ederede ND anwụọ, anyị na-echere naanị afọ ole na ole ma nwee ike ịrụ ọrụ na esi na ya pụta.
M na-eji CC-BY mgbe ọ bụla m nwere ike ọ nweghị ihe ọ bụla. Dị ka ederede a ma ọ bụ na ntanetị nke onwe m, mana na CC-BY mgbe niile, iji kwado ya remix na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na otu ụbọchị, edere m ma ọ bụ rụọ ọrụ dị mkpa.
Na mmadụ dere ọrụ wee gbasaa ya na-agba m ume. N'oge ndị a, ọ naghị esiri ike ịkpọtụrụ onye edemede ahụ. Ọ bụrụ na ị dee akwụkwọ ntuziaka na KDE 4 SC ma chọọ ederede a sụgharịrị site n'aka John Doe, ichere ya ka ọ nwụọ agaghị abụ ezigbo echiche, n'ihi na akwụkwọ ntuziaka ga-emecha bụrụ ihe ochie. Otu kubie ume DN adịghị edozi ọtụtụ. Echere m na ọ bara uru ịkọwa ọrụ gị maka onye edemede ahụ ma rụọ ọrụ ọnụ na mmegharị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. DN anaghị eme ka onye edemede ahụ bụrụ onye iro nke ọdịbendị n'efu.
Ọ bụrụ n ’ime“ remix ”nke ọtụtụ ndị odee na - eke ihe ọhụụ (ọ bụghị ịkpụ na mado), itinye ntinye ga - ezu. Inweta echiche sitere n'ọtụtụ akwụkwọ na ịkọbata ha na akụkọ "remix" a naghị ewere ya dị ka ihe nrụpụta (agaghị akpọ gị onye na-ede akwụkwọ). Can nwere ike ide banyere otu ihe na otu puku ụzọ. Ihe dị mkpa banyere CC-BY bụ na a na-agụ ma kesaa ọrụ ndị a n'enweghị ihe mebisịrị nwebisiinka, ndị nrụpụta bụ nke abụọ ma bụrụ naanị ndị dị mkpa.
Edemede mara mma, ọ dịka ọ si n'aka onye nta akụkọ 😀
Ezigbo isiokwu. M hụrụ otu okwu Stallman kwuru n'afọ gara aga (ma ọ bụ nke gara aga? Anaghị m echeta nke ọma), mgbe ọ bịara Argentina na FLISOL na ọ tụrụ m n'anya na ọkwa Spanish ọ na-ekwu.
Echere m na ọ ga-abụ onye siri ike n'omume, mana nke ahụ megidere. Banyere wildebeest, amaara m na ọ na-eme ya n'okwu niile ọ na-aga, n'okwu m gara, mmịfụ ahụ ruru 120U $ D haha.
Lee ya ruru 550 MXN. Echere m na mgbanwe ahụ dị ka ihe dịka 40 USD, nke na-eme m ka m chee na anyị na-agbanye ọtụtụ gburugburu ebe a 😀
Agakwara m ENLI ma dị ka ajụjụ ndị ị kwuru, echere m na e nwere onye ị bụ (echere m na anaghị m emehie), ihe kpatara m nnukwu amara bụ mgbe ọ gwara gị ka ị jiri nwayọ kwuo okwu ma ị mere ya mana jiri nwayọ nwayọ. Are bụ nnọọ nri e nwere ọtụtụ ìgwè na proprietary software, ma Olileanya mgbe ihe omume ha ga-abụ ndị ọzọ na free software. Nnọọ ezigbo nyochaa 🙂
Eji m omume ọma mee ya. Echere m na ọ ga-abụrịrị na o mejọrọ mmadụ, mana m chọrọ ka ọ ghọta ajụjụ m. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ ihe omume dị mma. Ma m yi uwe awọ. Ikekwe nke ahụ ga-enye gị njirimara zuru oke. 😛
Anaghị m echeta akụkụ ahụ banyere ire anyị akwụkwọ mmado Wildebeest mana echetara m na ọ mere ihe ejiji nke Santo jiri Cylinder nke HDD ochie tinye ya n'isi dị ka a ga - asị na ọ bụ mpaghara ya. Foto ndị a gbara anyị na ICU Amaghị m ebe ha si n'ihi na m hụrụ naanị ole na ole wee mee ka ihe ka njọ, naanị ụmụ akwụkwọ ole na ole pụtara.
Lee Saint Ignucius apụtaghị nye anyị. Amaghị m ihe kpatara ya.
Ahụrụ m Richard Stallman na Mgbakọ mbụ, Naanị na Ikpeazụ o mere na Viedma, RioNegro, Argentina ...
Ekwuru m na nke ikpeazụ, n'ihi na nwoke a, na Argentina anaghị alaghachi, n'ihi nsogbu SIBIOS ...
M gbara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogbako niile… M kwuru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, n'ihi na igwefoto igwefoto m agwụla…
Dị ka mmadụ, ọ bụ onye dị mfe. O nweghi ikuku nke divo ...
Ugbu a, dị ka onye mgbasa ozi nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, ọ bụ ihe dị oke egwu: Ọ naghị anabata ka sọftụwia nkeonwe na-ebikọ n'udo na sọftụwia efu
Qmmp: Igwe odi egwu di egwu dere na Qt
Canonical winks na mbadamba.